Joe Cole Oo Ka Digay Qalbi-jab Ku Dhici Doona Ciyaartoyda Liverpool Haddii Horyaalka La Kansalo - Gool24.Net
Joe Cole Oo Ka Digay Qalbi-jab Ku Dhici Doona Ciyaartoyda Liverpool Haddii Horyaalka La Kansalo
Xiddigii hore ee Chelsea ee Joe Cole ayaa sheegay in ay qasab tahay in xili ciyaareedka dib loo bilaabo oo la dhamaystiro kulamada hadhsan, isla markaana aan Liverpool laga dafirin Koobka Premier League ee ay ku guuleysigiisa labada kulan uga hadhsan yihiin.
Joe Cole oo sidoo kale u ciyaaray Liverpool sannadihii u dhexeeyey 2010-2013, waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhamaystiro horyaalka xilli ciyaareedkan duruuf kasta oo jirta, walibana lagu dhakhsado dhamaystirkiisa.
“Way caddahay inaynu u baahanahay in xili ciyaareedka sida ugu degdegga badan ee karaankeenna ay loo dhamaystiro, haddii la inoo ogolaado. Taas ayaa ah waaqica. Haddii aynaan dhamaystirin, waxay isku dhowaanayaan fasal ciyaareedka dambe, markaa xalka kaliya ee ay ila tahay inuu xalaasha yahay waa in si degdeg ah loo bilaabo.” Ayuu yidhi Joe Cole.
Laacibkan oo ka hor intii aanu ku biirin Chelsea u ciyaari jiray West Ham, waxa uu tilmaamay in qof walba uu isku dayayo, kuna talinayo wixii kooxdiisa u wanaagsan, laakiin ay go’aamada qaarkood qalbi jab ku noqon doonaan ciyaartoyda Liverpool.
“Kooxaha qaarkood ayay faa’iido u noqon doontaa (Haddii horyaalka la kansalo), kuwa kalena aad ayay u murugoon doonaan, laakiin waxa meesha yaalla waxyaabo ka waaweyn kubadda cagta oo ah nolosha dadka iyo hab-nololeedka. Qof walbana tijaabo ayuu ku jiraa, waxaanu mid walba doonayaa waxa u wanaagsan kooxdiisa.” Ayuu yidhi.
“Aniga fikirkayga, xalka kaliya waa in dib loo bilaabo horyaalka, haddii aynu dhamaystiri kari weyno, sababtoo ah, waxa jira dad aniga iga caqli badan oo xalal haya, laakiin waxaynu ku jirnaa marxalad ay tahay in waddanka oo dhan uu isku duubnaado.”
Si kastaba, Joe Cole waxa uu tilmaamay in go’aanka ugu qadhaadh ee ah tallaabada ugu dambaysa ee la qaadan karayo ee ah in horyaalka la kansalo uu qalbi jab ku keenayo ciyaartoyda Liverpool oo soddon sannadood kaddib ku hamiyeysa inay horyaalka Premier League ku guuleysato.